“Mareexaan Xaq Uma Lahan In Ay Sidan Kusii Noolaadaan”!! | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA “Mareexaan Xaq Uma Lahan In Ay Sidan Kusii Noolaadaan”!!
“Mareexaan Xaq Uma Lahan In Ay Sidan Kusii Noolaadaan”!!
Dowladda Kenya ayaa Axmed Madoobe u fududeysay in uu si dhib yar ah ku qabsado maamulka Jubbaland, beesha uu kasoo jeedo se waa looga tiro badan yahay, ugu yaraan beesha saddex aad ama afaraad ayeey Jubbooyinka ka yihiin sida ay dad badan qabaan.
Dagaalka Al Itixaad iyo dowladaha deris ee bartamihii 90-naadkii, wuxuu tuhun badan ku abuuray Kenya iyo Ethiopia, maaddaama beesha Mareexaan ee gobolka Gedo degta islamarkaana labada dowladood xudduud la leh ay u badnaayeen.
Tan iyo maalinkaas, dowladda Kenya ayaa u aragtay beeshaas in ay ka duwan tahay beelaha kale ee deggan deegaannada xuduudda u dhow, taas waxa ay keentay in qofka Mareexaanka ah uusan xaq u lahayn in uu qaato sharciga degnaashaha xerooyinka Qaxootiga, haddii uu doonayana uu ku galo magaca beelaha kale ee halkaas daga.
“In Kenya ay dhulkooda u diiddo, haddana deegaankood ugu imaato, Axmed Madoobe iyo xertiisana ay bilaabaan xarig iyo beegsi dhuumasho ah oo loo geysanayo dadka madaxda ka ah olollaha looga soo horjeedo dowladda Kenya, taas illaa xad caddaaladda beedna uguma taallo, mana oggolaan doonno,” ayuu u sheegay warbaahinta mid kamid ah odayaasha degmada Balad Xaawo oo u waramayay warbaahinta.
“Maamulka Jubbaland kama heystaan door wanaagsan, kan Galmudugna sidoo kale, madaxda waynahana wuxuu ka baqayaa in reerkaaga baad u eexatay in la yiraahdo, Soomaalida kale ugama sokeyno Farmaajo, ee waxa aan u baahannahay in aan sidaan xaalku ku socon haddii la doonayo nabad waarta!” Xaaji Cabdullahi Guhaad oo reer Beled Xaawo ayaa isna Shaaciye sidaas la wadaagay.
Haddaba su’aashu waxa ay tahay dadka Beled Xaawo iyo gobolka Gedo sow uma baahno gargaar iyo kaalmo in laga dhiciyo cadaawaha kusoo duullay?